Ungalungiselela njani indawo yokuphucula injini yosesho?
Khawucinge nje imeko oguqule ngayo iphupha lakho ngeyona nto kwaye wavula iwebhusayithi yakho. Ngoku, lixesha lokuphucula ubukho bakho kwi-intanethi kwaye ukhangela abathengi bakho abanakho kwi-domain yakho entsha. Ngokuqinisekileyo, ukukhuthazwa kwewebhusayithi yakho akunakwenziwa kwimihla njengoko kuthatha ixesha lokuba abasebenzisi bokukhangela benze inkcazo yakho. Nangona kunjalo, unokuba nefuthe kule nkqubo usebenzisa i-injini yokucwangcisa injini - logiciel pour faire fiche de paie. Njengoko i-SEO yinkqubo echitha ixesha, awuyi kufumana iziphumo ezikhawulezileyo. Nangona kunjalo, ukuphuculwa kokuqala kokwenza ngcono emva kokuba umthombo wakho we-intanethi ungabangela impembelelo ebalulekileyo kwi-intanethi yezolimo. Ngokomzekelo, ukukhethwa kwegama elichanekileyo kunempembelelo enkulu kwixesha lakho elizayo kwi-intanethi njengoko abathengi bakho banokufumana indawo yakho ngala magama okukhangela. Udinga ukwakha umkhankaso wokwenza kakuhle ngexesha elilodwa ukugcina ixesha elizayo kwaye unciphise isidingo sokulungisa nayiphina impazamo yewebhusayithi.
Kulesi sikhokelo, uya kuba neengcebiso malunga nabanikazi bezabelo abaye baqalisa imithombo yabo yewebhu. Iingcebiso ezilandelayo ziyakunceda ukuba uyilaphule isicwangciso esihle sokucwangcisa injini yocingo naluphi na ukuvula iwebhusayithi entsha ukuqinisekisa ukuba yenzelwe ukususela ekuqaleni ukutsala umgangatho wezithuthi ezivela kwiinjine zokukhangela.
Ndingayifumana njani i-SEO yam iwebhusayithi?
Kufuneka ukhethe iwebhusayithi yakho ngamagama akwii-intanethi ukuphucula izithuba zayo. Iphepha ngalinye lesayithi lakho kufuneka lijolise kwisethi yayo yamagama angundoqo akwizinga eliphezulu lokunceda ibhendi yokukhangela iqulethe umxholo wakho. Kufuneka udibanise isakhiwo sakho sewebhusayithi kwiindidi ezahlukeneyo. Uhlobo ngalunye lufanele lujoliswe kwigama elide lokukhangela ukuphakamisa ithuba lakho lokufikelela kwi-Google TOP ngemibuzo eyahlukeneyo. Ukulungiswa kwewebhusayithi kunenzuzo eninzi. Okokuqala kukho konke, kudala umxholo ocacileyo kunye nekota yophando kwikhasi lewebhu lewebhu, kunokuba ube nephepha eliphambili elijolise kumagama amanqaku amaninzi. Olu hlobo lokujolisa lunikeza ubuninzi bewebhu kwiwebhu.
Umxholo olungiselelwe umsebenzisi
Okwangoku, umxholo ochaphazelekayo kunye nomgangatho usebenza njengento ebalulekileyo yeGoogle. Isizukulwana esilungisiweyo sesiseko siyinxalenye yokucwangciswa kwesayithi. Kuthetha ukuba abanikazi bewebhusayithi banokulawula ngokupheleleyo le nxalenye ye-SEO. Ngoko ke, ngaphambi kokuqala nayiphi na imizamo ye-SEO, qiniseka ukuba umxholo wakho uhlelwe kakuhle kwaye uhambelana noshishino lwakho kunye nokubandakanya. Ngaphezu koko, kufuneka ufake ii-keywords ezifanelekileyo kumxholo wakho ukwenza ukuba kubonakale ukukhangela ibhola. Ndikucebisa ukuba ufake iincwadi eziphambili zeemodumo kunye neendlela zokufumana izithuthi kwiibhloko kunye nasekuqaleni komhlathi. Ngaphezu koko, ungayisebenzisa kwiingcaciso kunye ne-ALTs.
Ngokwe-uphando lwangoku, i-Google iphakame ukuba loo maphepha anamazwi angaphezu kwama-2 000 ulwazi. Yingakho ndicebisa ukubhala amaphepha ama-2-3 amanqaku amaninzi ngokucwangcisa ngokuqinileyo, ngokomzekelo, izikhokelo zenyathelo-nge-nyathelo, izifundo okanye iingcebiso. Uphando luyabonisa, ukuba umxholo omude kunye ophakathi nendawo unako ukufumana unxibelelwano kunemibhalo emfutshane. Ekugqibeleni, kuya kukunceda ukwakha inani elikhulu leekhonkco ezingenayo kwiphepha ngalinye.